Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ny marika Kosmetika Koreana Vella izao dia miitatra any Japon
Nanokatra ny magazay ofisiany i Vella tao amin'ny sehatra e-varotra lehibe indrindra ao Japana 'Qoo10' ary nanambara fa hivarotra vokatra hatsaran-tarehy madio sy mampitony miaraka amin'ny vokatra lehibeny dia vokatra vegan anisan'izany ny Vella Ultra Hydro Sun Essence.
Vella no marika voalohany amin'ny fikarakarana hoditra any Korea izay nanangana tsipika momba ny fikarakarana ny vozony ary efa nivarotra vokatra mihoatra ny 1 tapitrisa, nametraka ny toerany ao Korea.
Amin'ny alàlan'ity fanokafana ofisialy ity dia afaka mividy Vella Ultra Hydro Sun Essence ao amin'ny Qoo10 ihany koa ny mpanjifa Japoney. Vella Ultra Hydro Sun Essence no zava-boahary voalohany amin'ny masoandro sy vokatra fikarakarana masoandro izay azo ampiasaina mandritra ny taona amin'ny Wadiz.
Mankalaza ny fanokafana ny fivarotana ofisialy, manome fihenam-bidy 20 isan-jato i Vella hatramin'ny 26 Novambra amin'ny alàlan'ny hetsika fihenam-bidy lehibe amin'ny Qoo10.
Mandritra izany fotoana izany, Vella izay nivelatra tao amin'ny tsena Japoney nanomboka tamin'ny sehatra fiantsenana an-tserasera Qoo10 lehibe indrindra any Japon, dia manitatra ny fidirany maneran-tany amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo sehatra e-varotra lehibe indrindra any amin'ny faritra toy ny Shopee, sehatra varotra an-tserasera lehibe indrindra any Azia Atsimo Atsinanana, ary Amazon, orinasa e-varotra lehibe indrindra eran-tany.